Itoobiya: QM oo ka digtay dambi dagaal | KEYDMEDIA ONLINE
Itoobiya: QM oo ka digtay dambi dagaal
Itoobiya ayaa qorsheynaysa in ay duqeysi magaalada caasimadda u ah gobolka Tigray-ga
Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in ay ka walaacsantahay dambiyo dagaal oo ay suuragal tahay in ay ka dhashaan dagaalka ay ciidamada dowladda Itoobiya ku doonayaan in ay ku qabsadaan caasimadda gobolka Tigray ee Maqalle xilli uu gabogabo yahay waqtigii ay dowlladda u qabatay Jabhadda TPLF in ay isku soo dhiibaan.
Hay’adda ayaa sheegtay in dagaal weyni uu qarxi karo marka ay ciidamada dowladdu ku dhawaaqaan howgalka ay kula wareegayaan magaalada Maqalle.
Hadalka Qaramada Midoobay ayaa imanaya iyada oo Axaddii uu Ra’iisul Wasaare Abiy Axmed uu jabhadda Tigreega ee ku sugan Maqalle uu u qabtay in ay 72 saacadood isku soo dhiibaan.
Xoogagga Tigreega ayaa ku gacanseysray baaqa dowladda iyaga oo sheegay in ay is difaaci doonaan ilaa iyo inta ay ka geeriyoonayaan.
Guddi xuquuuqul insaan ah oo ay dowladda Itoobiya magacawday ayaa kal hore sheegay in dhallinyaro ka soojeedda qowmiyadda Tigreega ay bishan gudaheeda xasuuqeen 600 oo qof oo rayid ahaa kuwaas oo ku noolaa Maykadra ee gobolka Tigray. Jabhadda TPLF ayaa iyadu arrinkaa iska fogeysay waxayna ku baaqaday baaritaan calami ah oo madax bannaan.
Hay’adda Amnesty International ayaa iyaduna markii ugu horreysay diiradda saartay wararka xasuuqa Mykadra inkastoo aanay si dhab ah u sheegin cidda xasuuqaasi geysatay iyo tirada dadka la xasuuqay midna.
Dunida ayaa Arbacada maanta ah isha ku heysa magaalada Maqalle maadaama ay gabogabo tahay saacdihii ay xukuumadda Itoobiya u qabatay in ay isku soo dhiibaan xoogagga TPLF ee halkaas ku sugan.
In kabadan 40.000 oo qof ayaa dagaallada ka socda gobolkaas awgiis ka tallaabay xudduudda Itoobiya ay la leedahay Suudaan waxaa Iyana adag in gargaar bani aadannimo la gaarsiiyo dadka ku sugan gudaha gobolka maadaama ay go’antahay dhammaan isgaarsiinta gobolkaas.